Nchụso obodo Abbeyfield Farm - banye Kildare
Ma ị bụ onye hụrụ ịnyịnya n'anya nke nwere mmasị n'ịnyịnya, ma ọ bụ azụmaahịa na -achọ ahụmịhe ụlọ otu nwere ọdịiche, Abbeyfield Farm nwere ihe niile ịchọrọ.
Ntọala karịa hekta 240 nke ọmarịcha obodo Kildare nke Abbeyfield Farm bụ onye ndu Irelands na nchụso obodo. Ndị ọbịa nwere ike ịnwale aka ha n'ịgba égbè nduru ụta, ụta ụta, mgbọ égbè mgbado anya na ịnya ịnyịnya. Ma oge izizi ma ọ bụ karịa emezuru ma na -achọ ihe ịma aka, ndị nkuzi ọkachamara nọ ya iji hụ na ị mere nleta gị nke ọma.
Ka anyị gosi gị ime obodo Kildare ụzọ kachasị mma, na ịnyịnya, ma ị bụ onye ngụ oge mbụ ma ọ bụ onye na -agba ịnyịnya nwere ahụmahụ, anyị ga -emeju ihe ị chọrọ. Maka onye na -agba ụta, onye mbido ma ọ bụ onye na -agba ụta nwere nka, ụdị nka anyị ga -adabara mkpa gị yana nkuzi ọkachamara gụnyere.
Ihe na -erughị nkeji iri abụọ site na Dublin's M20, akwụkwọ ụlọ ọrụ na otu dị iche iche na -anabata. Ịde akwụkwọ dị mkpa.
Onye na-agba ịnyịnya Kildare, Adventure & Ihe, Outdoors, Nwee ezumike ezinụlọ, Clane
Clane, Obodo Kildare, Ireland.